“नो रिस्क नो गेन” को उदाहरण भारतीय क्रिकेटमा पूर्वकफ्तान महेन्द्र सिंह धोनी « LiveMandu
१ भाद्र २०७७, सोमबार १५:३२
“नो रिस्क नो गेन” को उदाहरण भारतीय क्रिकेटमा पूर्वकफ्तान महेन्द्र सिंह धोनी
Published On : १ भाद्र २०७७, सोमबार १५:३२
काठमाण्डौ, १ भाद्र, २०७७ । कप्तान कूल उपनामले परिचित महेन्द्र सिंह धोनीले १५ अगष्ट अर्थात भारतको स्वतन्त्रता दिवसको अवसरमा अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटको तालिकामा पुनः नदेखिने भएका छन् । धोनीले इन्स्टाग्राममा पोस्ट मार्फत् अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटबाट सन्यास लिएको घोषणा गरेका हुन् । उनले आफ्नो इन्स्टाग्राम पोष्टमा लेखेका छन्, ‘प्रेम र समर्थनका लागि तपाई सबैलाई धेरै धन्यवाद! आज (अगष्ट १५, २०२०) साँझ ७ बजेर २९ मिनेट (भारतीय समयानुसार) पछि, म अवकाशप्राप्त मानिनुपर्छ ।
धोनीले सन्यास लिएको खबर सुनेपछि विश्वभरीबाट शुभचिन्तक तथा विश्व क्रिकेटका दिग्गजहरूले भारतीय मेडिया तथा सामाजिक सञ्जालमा ब्यापक प्रतिक्रिया दिएका छन् । यो डेढ दशकदेखि अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट मञ्चमा लिइने अथवा भनौ रुचाइने एउटा यस्तो नाम हो जो हातबाट गुमिसकेको खेललाई आफ्नो ब्याटिङको बुत्तामा जितमा परिणत गर्नसक्थे । बिबिसि हिन्दीले लेखेको छ, “१५-१६ वर्षदेखि चलिआएको धोनीको जादूमयी यूग समाप्त भएको छ ।”
धोनीले अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट मञ्चबाट सन्यास लिएपनि यस विश्व स्वास्थ्य संकटपछि हुने भनिएको आइपीएल (IPL) मा उनी पुनः चेन्नइ सुपर किङ्गका तर्फबाट मैदानमा उत्रने छन् । १३ औं संस्करणको IPL युनाइटेड अरब इमिरेट्स (UAE) मा हुने घोषणा भएका छ र यो यही १९ सेप्टेम्बर २०२० देखि प्रारम्भ भएर ८ नोभेम्बर २०२० सम्म हुनेछ ।
शनिवार अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटबाट सन्यास लिएको घोषणा गरेका महेन्द्रसिंह धोनीका लागि यस्तो कुनै पनि ट्रफी छैन जसमा उनले जित प्राप्त गर्न सकेनन् । उनले ५० ओभरको प्रतियोगितामा वर्ल्ड कप र च्याम्पियन्स ट्रफी जितेका छन् भने २० ओभरको खेलमा वर्ल्ड टी-२०, आईपीएल र च्याम्पिएन्स लीग जित्न सफल भएका छन्।
टेस्ट म्याचमा उनले भारतीय क्रिकेट टोलीलाई सबैभन्दा प्रथम स्थानमा पनि पुर्‍याइसकेका छन् । क्रिकेटमा नयाँ इतिहास बनाउन सफल भएका भारतीय क्रिकेट टोलीका पूर्व कप्तान धोनीका १० अद्वितीय निर्णयमा एक नजर लगाऔँ ।
१. डामाडोल भइसकेको विश्वकपको फाइनलमा हरेश खाइसकेका जोगिन्दर शर्मामाथी बिजयी विश्वास
सन् २००७ को वर्ल्ड टी-२०को अन्तिम खेलमा धोनीले जोगिन्दर शर्मालाई अन्तिम ओभरमा बल गर्न नलगाएका भए दुनियाँलाई सायद उनी विश्व विजेता टोलीका एक सदस्य थिए भन्ने थाहा पनि हुँदैनथ्यो कि । किनकी क्रीजमा मिस्बाह उल हल थिए जो राम्रो लयमा थिए। यस्तो अहम् समयमा धोनीले अनुभवी हरभजन सिंहको सट्टा अनुहार र शारिरिक हाउभाउबाटै हरेश खाइसकेको देखिएका जोगिन्दर शर्मालाई बल गर्न लगाए ।
फाइनल खेलको अन्तिम ओभरमा पाकिस्तानलाई १३ रनको खाँचो थियो भने भारतलाई मात्र एक विकेटको आवश्यकता थियो र उनले ओभरको तेस्रो बलमा मिस्बाहको विकेट लिए र धोनीको दाउलाई सदैका लागि यादगार बनाइदिए ।
सन् २००७ को वर्ल्ड टी-२० अन्तर्गतको लीग चरणको खेलमा पाकिस्तान र भारतको खेल बराबर भयो।
त्यसपछि बल आउटबाट फैसला हुने भयो । पाकिस्तानले त्यसमा आफ्ना नियमित बलरहरू नै बलआउटका लागि रोजेको थियो । तर धोनीले हरभजन सिंहबाहेक अफटाईम सहायक बलरहरु वीरेन्द्र सहवाग र रोबीन उथप्पा जस्ता सहायक बलरकै बलमा खेल जिते ।
सन् २०११को विश्वकप फाइनलमा कुलशेखरको बलमा धोनीले जीत दिलाउने गरी प्रहार गरेको छक्का कसले भुल्न सक्ला? त्यही छक्का नै २८ वर्षपछि भारतलाई क्रिकेटको विश्व विजेता बनाएको थियो । त्यस खेलमा धोनीले फाइनलमा अविजित ९१ रन बनाएका थिए । त्यस अघिका खेलहरूमा धोनीले धेरै रन बनाउन सकेका थिएनन् । तर पनि फाइनलमा राम्रो लयमा रहेका युवराज सिंहको सट्टा पाँचौँ स्थानमा आफै मैदानमा उत्रिने धोनीको निर्णय कम घातक थिएन तर ।
त्यस बेला क्रीजमा बायाँ हातबाट खेल्ने गौतम गम्भीर थिए र धोनी दायाँ र बायाँ हाते ब्याटस्म्यानको तालमेल कायम राख्न चाहन्थे । अर्कोतर्फ, श्रीलंकाका स्पिनरहरू अघि आफूले सहजै रन जुटाउन सक्ने धोनीको विश्वास थियो । धोनीले आफैमाथी गरेको धोनीले जे सोचे त्यही नै भयो ।
४. युवराज सिंह माथि बलिङमा दाउ
युवराज सिंह ब्याटस्म्यानका रूपमा परिचित छन् । तर सन् २०११ को विश्वकपमा उनलाई धोनीले बलरका रूपमा प्रयोग गरे र त्यो योजना पनि सफल भयो । युवराज सिंहले ९ खेलमा ७५ ओभर बल गर्दै १५ विकेट लिए। उनले क्वार्टर फाइनल, सेमिफाइनल र फाइनलमा गरी दुई-दुई विकेट लिन सफल भएका थिए ।
५. अश्विन-रैनाको प्रयोग
सन् २०११ को विश्वकपमा धोनीले सुरेश रैना र आर अश्विनलाई सुरुवाती खेलहरूमा सार्वजनिक गरेनन् र नकआउट चरणमा खेलमा समावेश गरे । अश्विनले उक्त प्रतियोगितामा दुई खेल मात्रै खेले जसमा एक खेल अस्ट्रेलिया विरुद्धको क्वाटर फाइनल थियो । यो खेलमा धोनीले अश्विनबाट बल गर्न सुरु गराए।
दुई विकेट लिएका आश्वीनले अस्ट्रेलियाको लय बिगारे ।
सुरेश रैनाले पनि अस्ट्रेलिया विरुद्ध अविजित ३४ रन बनाएर भारतको जितमा योगदान दिए । उनले पाकिस्तान विरुद्ध सेमिफाइनलमा पनि अविजित ३६ रन बनाए।
६. निशानामा आशिष नेहरा
सन् २०११को वर्ल्ड कपको सुरुवाती खेलहरूमा आशीष नेहरा प्रभावकारी भएनन् । तर पाकिस्तान विरुद्धको सेमिफाइनल खेलमा धोनीले उनलाई मौका दिए । त्यो पनि अस्ट्रेलिया विरुद्ध शानदार प्रदर्शन गरेका अश्विनको स्थानमा । धोनीको यो दाउ पनि सफल भयो । १० ओभरमा मात्रै ३३ रन दिँदै उनले दुई विकेट लिँदै उनले भारतलाई फाइनमा पुग्न सहयोग गरे।
अस्ट्रेलियामा भएको सन् २००८ को ट्राई सीरीजमा धोनीले छनोटकर्ताहरू सामु युवा खेलाडी चुन्न माग गरे।
त्यहाँका ठूला मैदानमा बढी उमेर रहेका खेलाडीहरूले रन रोक्न सक्दैनन् भन्ने उनको बुझाइ थियो । यसका लागि धोनीको निकै आलोचना भयो। तर त्यही फैसलाका कारण भारतले अस्ट्रेलियामा पहिलो पटक ट्राई सीरीज जित्यो।
प्रतियोगितामा गौतम गम्भीर, रोहित शर्मा र प्रवीण कुमार जस्ता युवा खेलाडीहरूको भूमिका महत्त्वपूर्ण रह्यो।
८. इशान्त शर्मामाथि विश्वास
सन् २०१३ मा इङ्ग्ल्यान्डमा भएको आईसीसी च्याम्पीएन्स ट्रफीको फाइनल खेल वर्षाका कारण २० ओभरमा सीमित गरियो ।
जीतका लागि भारतले इङ्ग्ल्यान्डलाई १३० रनको लक्ष दियो । मोर्गन र बोपाराको शानदार प्रदर्शनका कारण इङ्ग्ल्यान्ड जीत तर्फ अघि बढिरहेको थियो । उसलाई अन्तिम तीन ओभरमा २८ रनको आवश्यकता थियो । यस्तो अवस्थामा धोनीले सबै भन्दा बढी रन दिइरहेका ईशान्त शर्मालाई बल गर्ने मौका दिए ।
त्यो निर्णय अचम्म लाग्दो थियो तर ईशान्तले एउटै ओभरमा दुवै ब्याट्सम्यानलाई आउट गरे र इङ्गल्यान्डको जीतको सपना तोडिदिए ।
बीचमा खेल्दै आएका रोहित लामो समय सम्म आफ्नो प्रतिभा अनुरूप प्रदर्शन गर्न सकिरहेका थिएनन् । धोनीले उनलाई एक दिवसीय खेलमा ओपनर अर्थात् सुरुवाती खेलाडीका रूपमा अघि सारे ।
ओपनरका रूपमा शर्मा अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटमै सबैभन्दा सफल ब्याटस्म्यानका रूपमा अघि बढे ।
भारतीय क्रिकेट टोली बाहेक धोनीले आईपएलमा चेन्नई सुपर किङ्ग्सलाई पनि सबैभन्दा सफल टोली बनाए ।
त्यस बेला उक्त टोलीका लगानीकर्ता एन श्रीनिवासनले चाहँदा चाहँदै पनि उनले टिममा एक जना खेलाडीलाई अनुबन्धन गर्न अस्वीकार गरिदिएको जानकारी सार्वजनिक भएको थियो।